Fitsidihan’ny minisitera : tsapa ny lanja ara-toekaren’Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy | NewsMada
Fitsidihan’ny minisitera : tsapa ny lanja ara-toekaren’Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy
Par Taratra sur 15/04/2016
Nitsidika ny toeram-pitrandrahana tany Ambatovy Moramanga sy ny ozinina fanodinana ny nikela sy kobalta ny delegasiona maro avy ao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika (MPMP), ny herinandro lasa teo. Tafiditra ao anatin’ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpiasa izany, novolavolain’ny fitantanana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy stratejika ao amin’ny minisitera. Tanjona ny ahalalan’izy ireo ny fivoarana sy hifehezana ny dingana samihafa amin’ny fitantanan-draharaha, ny teknolojia, mifanandrify rahateo amin’ny politikan’Ambatovy miasa ao anatin’ny mangarahara. Nahazo traikefa tamin’izao fitsidihana izao koa ireo tompon’andraikitra isam-paritra ao amin’ny MPMP. Tsapan’izy ireo ny lanja ara-toekarena entin’ity orinasa ity eto amin’ny firenena.
Mitsinjo ny tontolo iainana
Ankoatra ny dingana samihafa amin’ny famokarana, nahita maso ny fandaharanasa manokana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana koa ny mpitsidika. Toy ny toerana fambolena ny zana-kazo any Ampangadiatrandraka Moramanga, sy ny famindrana azy, ny fikarakarana manokana ny karazana “orchidées”, sns.
Tany Toamasina, nahaliana ny fampiofanana ny mpiasa, ny dingam-pamokarana nikela sy kobalta ao anatin’ny ozinina. Niaiky ny mpitsidika fa anisan’ny manana traikefa sy tena maneho ny maha matihanina Ambatovy amin’ny fomba fiasa.
Maherin’ny 10.000 ireo efa nitsidika ity orinasa ity, nahitana mpianatra, olon-tsotra, avy amin’ny sehatra isan-karazany.